जिते–अध्यक्षः हारे–सल्लाहकार - HAMRO YATRA
- बसन्तप्रकाश उपाध्याय
दुई वर्षअघि कपिल शर्माको ‘कमेडी शो’ हेरिरहेका बखत भूकम्प आएको थियो । त्यस अघि हाँसिरहेको परिवेश त्यसपछि आजसम्म रोइरहकै छ ।
त्यसो त हरेक दिन हरेक परिवेशमा समस्याका अनेकौं ‘भूकम्प’ भोग्नेहरुका लागि ‘हाँसो’ मात्रै कहिले पो थियो र ! जे होस् अवोध शिशुलाई कुटुनी बूढीले हँसाए झैँ समयले मान्छेलाई थुप्रै निहुँमा हँसाउँदो रहेछ ।
यस्तैमा हिजो पत्रकार महासंघ काठमाडौंको अधिवेशनमा हाँस्न पाइयो केहीबेर । महासंघको विधानमा जिन्ते ‘अध्यक्ष’ हुने र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ‘सल्लाहकार’ हुने व्यवस्था रहेछ । यस व्यवस्था अनुसार केही मान्छे जिते ‘अध्यक्ष’ हुने र हारे ‘सल्लाहकार’ बनिने लोभमा पनि उठ्दा रहेछन् ।
धेरै ‘फुरफुर’ देखियो हिजै । एउटै तलाउमा बस्ने भन्दैमा कहाँ हुन्छ र ! राजहाँसले पो छुट्याउने हो– दूधको दूध र पानीको पानी । त्यही तलाउमा ताक हेरिरहेको बकुल्लाले त खोज्ने उही स्वार्थको माछामात्रै हो । एकथरिलाई माछा खानु पनि छ । अनि राजहाँसहरुलाई लखेट्नु पनि छ ।
तरङ्ग हुँदैन तलाउको पानीमा । बाल्टिनमा पानी उभाएर काउलीमा हाले हुन्छ । अथवा शौचका खातिर ‘ट्वाक’ डुबाए हुन्छ । निष्प्राण, निर्जीव तलाउको पानी कुरेर बस्ने काम हो बकुल्लाहरुको ।
भूकम्पताका एकथरिले पाल र त्रिपाल बाँडेका थिए सुमार्गीको । केहीले ‘अरुवा–चावल’ र ‘अररको दाल’ बोकेका थिए चौधरीको । परकम्पनको त्राहिमाम साँचेर केहीले रेडक्रसको ‘स्लिपिङ–व्याग’ पनि ओसारेका थिए पत्रकारको नाममा । हिजो वानेश्वर ब्यांक्वेट परिसरमा पानी के परेको थियो ? तिनै ‘त्रिपाल’ले आफ्नो ‘स्कुटी’ छोपेको देखियो । पत्रुकार व्यवहारमा यो निर्लज्ज ‘हर्कत’लाई के भनूँ खै ?
लेख्नेभन्दा नलेख्ने धेरै, पढ्नेभन्दा नपढ्ने ज्यादा र समाचारमा ‘जिउने’ भन्दा डबकामा ‘पिउने’को संख्या बढी भएपछि हुने यस्तै हो । वास्तवमा एकताका कुरो हुन्थ्यो– ‘मिसनको’ । अचेल स्वरुपमा परिवर्तित छ– ‘कमिसन’मा । ‘न्यूज’मा भ्यूज मिस्सिने प्रसंग नौलो रहेन अब । बरु न्यूजमा ‘निहुँ’ खोजिन्छ अचेल । ‘भ्यूज’लाई ‘मिस–यूज’ गराइन्छ जहीतहीँ ।
जे गर्ने पनि छुट छ हामीकहाँ । ६० वर्षेले प्लस टु कार्ड देखाएर विद्यार्थी सहुलियत लिन खोजे जस्तै । अथवा एसएलसी पास नै नगरी आई.एल. गरे झैँ । वा यसो भनौं– रिपोर्टर नै नभइकन इडिटर बन्ने संस्कृति सरह । ठ्याक्कै प्रवृत्ति मिल्छ– हारे सल्लाहकार जिते अध्यक्ष बन्ने लालसा सरह ।